एश्वर्य र कट्रिनालाई सलमान खानले यस्तोसम्म गरेका रहेछन्, जुन कुरा सुनेपछि उड्यो सबैको होस् – Online Nepal
October 15, 2020 90
एजेन्सी । बलिउडका दबंग खान सलमान खानले आफ्नो एक्स गर्लफ्रेन्डद्धए एश्वर्य र कट्रिनाको बारेमा सार्वजनिक ठाउँमै गरे आफुसंग सम्बन्ध रहंदा भएको कृयाकलापहरु सार्वजनिक । उनले यी दुई प्रेमीकाहरु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पात्रका रुपमा रहेको बताउँदै जब यी दुईसंग आफु प्रेममा रहंदा गरिएको कुराहरु सुनाए तब सुन्ने सबै एकअर्कालाई हेरेको हेरै भए ।
सलमानले आफ्नो जीवन कालमै सबैभन्दा धेरै माया गरेको एश्वर्य राय र कट्रिना कैफलाई नै बताए । उनले यी दुवैलाई जस्तो प्रेम आजसम्म कसैलाई नगरेको पनि खुलासा गरे । सबैका भाईजान खानले यिनीहरुसंग आफु सम्बन्धमा रहंदा आफुले यी दुवैलाई निकै नै बुझ्ने प्रयास गरेको पनि बताए । साथै उनले यी दुवैले आफुलाई नबुझिदिएको गुनासो पनि सार्वजनिक गरे ।
जब सलमानले आफ्नो प्रेम, प्रेमीका र प्रेमीकाहरुसंगको गुनासो व्यक्त गरे त्यतिबेलाको माहोलमा सन्नाटा छाएको थियो । किनभने सलमानले यी दुवैसंग सम्बन्ध तोडिएपछि पहिलो पटक मुख खोलेका थिए । यतिमात्रै नभई आकर्षण अन्य महिलाहरुमा भएता पनि प्रेम भने अब हुन नसक्ने बताए ।
Prevयी तीन राशि हुनेले लगाउनु हुँदैन् सुन, जीवनलाई हुन्छ नोक्सान
Nextश्रीमान र श्रीमतीको परीक्षा !
कोरियाको अस्पतालबाट जिवनमरणको दोषाधमा मृ#त्युसंग संङ्घर्ष गर्दै थापा मगर
महाबिर पुनले पैसा खाएको आरोप लागेपछि मिडियामा ! यस्तो रहिछ वास्तविकता – गरे चिरफार (हेर्नुहोस भिडियो)
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (59632)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (49703)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44435)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44198)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (42958)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (40958)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37383)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35717)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28653)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27108)
दशैंको दिन काठमान्डूबाट आयो अत्यन्तै दुखद खबर।
दशैमा रमाउदै फर्किंदा बाटोमै लालबाबुको मृ त्यु